ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ကို ငှားသင့်တဲ့ လက္ခဏာ(၅)ရပ်
အချို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့လုပ်ငန်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတွေကို ငှားရမ်းဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြသလို မဝံ့မရဲလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အဆင်ပြေသလို၊ သင့်တော်သလိုပဲ သုံးစွဲမိတတ်ကြပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းတစ်ခုဟာ သင့်၏ လုပ်ငန်းကို အလွယ်တကူ မှတ်မိအောင်ဆောင်ရွက် နိုင်စွမ်းတွေရှိသလို အထင်ကြီး လေးစားမှု တွေကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ပရောဖက်ရှင်နယ် ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းများကို သုံးစွဲခြင်းက မိမိ Customer တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတွေဟာ Design တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် သင်ကြားလေ့လာမှုတွေ အများကြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းမှာ အောက်ပါအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်နှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ဆိုရင်တော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်သင့်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁) Marketing Materials များ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်း
သင့်လုပ်ငန်း၏ ထုပ်ပိုးမှု့ပုံစံ Design တွေ၊ Flyer Design တွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Design တွေ နှင့် တခြားသော Marketing Material Design တွေဟာ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိပဲ အရမ်းကိုကွဲပြားခြားနားလွန်း နေပါသလား? သင့်၏ Marketing Material Design တွေဟာ သင့်ဖောက်သည်ကို ထိရောက်သော Message တွေပေးဖို့ခက်ခဲ နေပါသလား? အဲလို ခက်ခဲပြီး ကွဲပြားနေတာတွေကို Professional Graphic Designer တစ်ယောက်ဟာ တစ်စုတစ်စည်းဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် လုပ်ငန်း၏ Business Card Design နှင့် အခြား အရေးကြီးသော Design တွေကိုပါ လိုက်လျောညီထွေးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Graphic Design တွေဟာ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် Brand Ambassador တွေဆိုလျင်လည်း မမှားပါဘူး။
၂) ဈေးပေါတဲ့ ဂရပ်ဖစ်များ သုံးစွဲခြင်း
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းလောက်က ဒီဇိုင်းတွေဟာ အခုချိန်မှာဆို ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ခေတ်နောက်ကျသွားတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဈေးပေါတဲ့ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းတွေကို သုံးစွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Brand ဟာ ဈေးပေါတဲ့ Brand တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီးဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။Business Communication ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တော်တော်များများမှာလည်း Graphic Design တွေသုံးစွဲရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်သော Message တွေကို ထိရောက်စွာ ပေးနိုင်ဖို့နှင့် သင့်၏Product ကို အလွယ်တကူ မှတ်မိနေစေဖို့အတွက် Professional Graphic Designer တွေလိုအပ်ပါတယ်။ Quality ကောင်းတဲ့ Graphic Design တွေကို အကောင်းဆုံး Tools အဖြစ် သင့်၏လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချသင့်ပါတယ်။
၃) Professional မဆန်သော လိုဂိုများသုံးစွဲမိခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အမှတ်အသားဖြစ်သော လိုဂိုဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ လိုဂိုကို ကြည့်ရုံဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး မိမိလုပ်ငန်းကို ပုံပေါ်သင့်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးလွန်းပြီး ဘာကိုရည်ရွယ်မှန်း မသိသော လိုဂိုက မိမိလုပ်ငန်း၏ Image ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ Professional မဆန်တဲ့ လိုဂိုကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ တန်ဖိုးဟာလည်း လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိလုပ်ငန်း၏ လိုဂိုကို Professional ဆန်အောင် Design ဆွဲသင့်ပါတယ်။
၄) မှားယွင်းသော Tools များကို သုံးမိခြင်း
Design ဆွဲရာမှာ ထိရောက်သော Tools တွေကို သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် မိမိ Design ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက် အနေဖြင့် Design တစ်ခုဆွဲဖို့ Paint တို့ Microsoft Word တို့လိုမျိုး programme တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် သုံးစွဲကောင်း သုံးစွဲနိုင်သော်လည်း High Quality Design များကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မှားယွင်းသော Tools တွေကို သုံးမိနေလို့ပါ။ လိုအပ်သော Design နှင့် ကိုက်ညီသော Tools တွေမသုံးနိုင်လျှင် မိမိလုပ်ငန်း၏ Quality ပါ ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။